प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा यस्तो तस्वीर र भिडियो भेटिएपछि हंगामा ! – Online Marg
प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा यस्तो तस्वीर र भिडियो भेटिएपछि हंगामा !
Posted on Saturday, February 15th, 2020 2:04 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
मुलुकमा बलात्कार बढ्यो भन्दै केही समयअघि पोर्न साइटहरु बन्द गर्ने घोषणा गरी आलोचनाका पात्र बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफ्नै व्यक्तिगत वेबसाइटमा अश्लील भिडियो आउँछ भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, यो सत्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत साइट www.kpsharmaoli.com मा जाने जो कोही लज्जित हुनपुग्छ ।
यो साइटमा प्रधानमन्त्री ओलीबारेका जानकारी भन्दा पनि अश्लील भिडियोहरु देखा पर्छन् । डोमेनहरुबारे जानकारी दिने साइट www.whois.com का अनुसार चीनको सिचुआँ प्रान्तका एकजनाले आफ्नो नाममा उक्त डोमेन दर्ता गरी अश्लील भिडियो अपलोड गरेका हुन् ।
ओलीको सचिवालयले आफ्नो डोमेन नवीकरण नगर्दा यस्तो हुन गएको बताइएको छ । हाल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले www.kpsharmaoli.com.np ठेगानामा नयाँ व्यक्तिगत साइट दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा यस्तो तस्वीर र भिडियो भेटिएपछि समाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
Posted in राजनीतिक समाचारTagged #प्रधानमन्त्री ओली